Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo iyo taliska nabad sugidda | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo iyo...
Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo iyo taliska nabad sugidda
“Madaxweyne Farmaajo iyo taliskiisa nabadsugidda welin kama quusan muddo kororsi, sababtoo ah wey ogyihiin in aysan doorasho xalaal ah ku guulaysan karin. Waxey doorteen waddo qalaalase abuur ah oo uu billawgeedu yahay guddi doorasho oo xubno nabadsugid iyo CBB u badan“.
“Waxey ku tala galeen in ay fursad walba xiisad hor leh ku abuuran, si ay Soomaali u kala doorato tooda ama in lagu kala tago. Soomaali waxey marag ka tahay in 30 sano koox kaligeed xoog keeda ah wax ku meel marsata la waayay, cid kasta oo awood is baddana, masiir xun ayaa u danbeeyey“.
“Villa Somalia iyo taliska nabadsugidda isbaarooyinka ay doorashada ku horgaynayaa waa kuwo is dabayaala, waase la fahamsanahay. Dalkaan doorasho malxiis iyo marag fur been ah ka socon mayso. Waqtiga iyagaa iska lumiyey, Soomaalina way ka tashan, dalkana halistooda waan ka badbaadsanaynaa Ilaaheey idinkii“.